I-IBS nokukhathazeka: i-gut-brain axis nokuthi ungayiphatha kanjani i-IBS ehlobene nokucindezeleka - Imfundo Yezempilo | Septhemba 2021
Ezempilo Imfundo Yezempilo Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo, Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Ezemidlalo Ezisindayo Umphakathi, Inkampani Izindaba, Wellness Izidakamizwa Vs. Umngani Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Ezokuzijabulisa Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Imidlalo
Main >> Imfundo Yezempilo >> Ingabe ukukhathazeka kubangela i-IBS?
Ingabe ukukhathazeka kubangela i-IBS?
Uzizwa ukhathazekile ukutadisha isivivinyo esibalulekile, ulungiselela ukucela umqashi wakho imali, noma ulungele ukuhlala phansi ube nengxoxo enzima nomlingani wakho. Ngemuva kwalokho, lowo muzwa ojwayelekile wokuganga uyakushaya: Isisu sakho sinzima futhi sibuhlungu, futhi mhlawumbe udinga ukuphuthuma endlini yangasese ngokushesha. Isisu esithukuthele siyindlela ejwayelekile yokusabela ezimeni ezinciphisa ukukhathazeka. Izinkinga zemizwa nezinkinga zokugaya ukudla zivame ukuhambisana. Kepha ngabe kukhona ukuxhumana phakathi kwezehlakalo zempilo noma ukuphazamiseka kwengqondo kanye nesifo samathumbu esibuhlungu (IBS)? Kuyinkimbinkimbi.
Yini i-irritable bowel syndrome (IBS)?
Ngokusho kweHhovisi Lezempilo Labesifazane, isifo esibuhlungu samathumbu (IBS) yi- inhlanganisela yezimpawu lokho kuhlala okungenani izinyanga ezintathu. Izimpawu ezivamile ze-IBS zifaka:
Ukuphathwa yisisu noma ukuqunjelwa
Ezinye izimo zingadala izimpawu ezifanayo, ngakho-ke kubalulekile ukuthi ube nokuhlolwa kwezokwelapha ukuze uqiniseke ukuthi akukho kulokhu okukhona, kusho UDavid D. Clarke , MD, uprofesa we-gastroenterology kanye nomongameli we I-Psychophysiologic Disorders Association .
Isibonelo, umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo angafuna ukukhipha isifo se-celiac, isifo samathumbu esivuthayo, isifo sikaCrohn, ukungabekezelelani kwe-lactose, noma umdlavuza wekoloni. I-IBS ivame ukuxilongwa ngokuqedwa, inqubo yokuqinisekisa ukuthi izimpawu zakho azibangelwa ezinye izifo ezifanayo.
Yini ebangela i-IBS?
Asikho isizathu esisodwa esicacile se-IBS, ngokusho kwe- Umtholampilo waseCleveland . Kodwa-ke, kunezici ezithile zobungozi:
Kuyoze kube nini u-30mg we-vyvanse
Ubulili: I-IBS ivame kakhulu kwabesifazane kunakubesilisa. Mayelana 2 kwabangu-3 abantu abane-IBS bangabantu besifazane.
Ukucindezeleka: Ungaqala ukuba ne-IBS ngenkathi ubhekene nokucindezeleka kwengqondo okukhulu, kuchaza I-Ashkan Farhadi, MD , udokotela wamathumbu e-MemorialCare Orange Coast Medical Center eFountain Valley, eCalifornia.
Ukuphazamiseka kwengqondo: Izimo ezinjenge-post-traumatic stress disorder, panic disorder, ukudangala, ukukhathazeka, kanye nokuhlangenwe nakho okubi ebuntwaneni (ACE) kungahle kuxhumeke kwi-IBS, ngokusho kukaDkt.
Ukuphazamiseka ku-gut biome: Cishe isiguli esisodwa noma ezimbili kweziguli ezinhlanu ezine-IBS zizoba nokuqhuma kwamagciwane emathunjini amancane. Kunezimo emathunjini ezingakuhlelela kusengaphambili. Ungaba nesiqephu esibi se-gastroenteritis… lapho ukutheleleka kungasekho, ukuzwela ngokweqile okuhlala ngemuva kwalokho kungaholela ezimpawu ze-IBS, kusho uDkt. Farhadi.
Ngenhlanhla, i-IBS ayinciphisi isikhathi sempilo yesiguli, bobabili uDkt Farhadi noDkt Clarke baqinisekisile. Futhi akuholeli kumdlavuza. Kunezindlela zokwelapha ezisebenzayo ezingabuyisa ikhwalithi yempilo yakho, noma ngabe uhlangabezana ne-IBS kuphela, noma ukukhathazeka, futhi.
I-IBS nokukhathazeka kuhlobene kanjani?
Ingqondo yakho nezimpawu zakho zesisu (GI) zixhumene, ngohlelo lokuxhumana emzimbeni wakho olubizwa nge-gut-brain axis. Ngamanye amagama, lapho uhlelo lwakho lwezinzwa (olulawula imizwa nemicabango yakho) luthola ukucindezeleka, lokho kuphendula kuthinta ipheshana lakho le-GI — futhi ngokufanayo.
Lapho uzizwa ukhathazekile, ama-hormone okucindezeleka akwenza uzizwe ngaleyo ndlela angadluliselwa emathunjini akho — okudala izimpawu ezingokomzimba abantu abavame ukuzibiza isisu esisabekayo , lokho kunyakaza okungazelelwe kwamathumbu lapho ucasukile. Noma, lapho amajaqamba esiswini ejwayelekile ekwenza uzizwe sengathi ungadinga ukuphuthuma endlini yangasese nganoma yisiphi isikhathi, imizwa yakho kungenzeka ithinteke. Izinto ezilula njengokulala nobusuku nabangane noma ukuhamba ngemoto ende kungandisa ukucindezeleka nokukhathazeka komphakathi. Kunzima ukwazi ukuthi yini eza kuqala — ukukhathazeka, noma izimpawu ze-IBS.
Imbangela nomphumela kwezokwelapha kunzima kakhulu ukusungula, ikakhulukazi esingakusungula ukuzihlanganisa, kusho uDkt. Farhadi. Ukukhathazeka kuhlotshaniswa kakhulu ne-IBS, futhi i-IBS ihlotshaniswa kakhulu nokukhathazeka. Ukuthi i-IBS ibangela ukukhathazeka, noma ukukhathazeka kudala i-IBS kusazoboniswa. Kufana ne-conundrum yenkukhu neqanda.
Ukukhathazeka ne-IBS kungashubisana, kusho uDkt Clarke. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukucindezelwa kwengqondo kanye nokukhathazeka okujwayelekile kuvame kakhulu ezigulini ezine-IBS, uma kuqhathaniswa neningi labantu.
Isifundo esisodwa kuphetha ngokuthi okuhlangenwe nakho okungahambi kahle kwezingane (ACE's) kwandisa amathuba e-IBS. Esinye isifundo ithi iziguli ezingama-30% ze-IBS zibika ukuthi zinokucindezeleka, uma kuqhathaniswa ne-18% yabantu jikelele. Ngokufanayo, iziguli eziyi-16% ze-IBS zathi zinokukhathazeka, kuyilapho abantu abangu-6% bebike ukukhathazeka. Ku- ucwaningo oluthile izinombolo bezithusa kakhulu: ama-44% eziguli ze-IBS abike ukukhathazeka, kwathi ama-84% abika ukudana. Ukuvumelana okujwayelekile ukuthi awukwazi ukwehlukanisa impilo yengqondo ne-IBS.
Ungayiphatha kanjani i-IBS ephathelene nokucindezeleka
Ukwelashwa kwe- IBS ingafaka ukuguqulwa kwendlela yokuphila kanye nemithi kadokotela, kuya ngezimpawu nobukhulu besifo. Lapho ukukhathazeka kukuxubekile, ukwelashwa kufanele futhi kufake izindlela zokwelapha ukunciphisa ukucindezeleka noma ukubhekana nezimpawu zokuphazamiseka kwengqondo okuhlobene.
Izinguquko zendlela yokuphila
Ngokuvumelana ne IHarvard Health , ezinye izinguquko zendlela yokuphila zifaka:
Ukwanda kancane kokudla kwefayibha ukulawula amathumbu
Ukulandelela ukudla okudliwayo ukukhomba noma yikuphi ukudla okubangela i-IBS
Ukudla ukudla okuncane ukugwema ukuqunjelwa kanye negesi
Ukuqinisekisa ukutholakala kwamanzi okufanele
UDkt Farhadi uthi ukholelwa ukuthi imfundo yiyona nto ebaluleke kakhulu ukuphatha i-IBS, futhi ukhuthaza iziguli zakhe ukuthi ziqonde imizimba yazo nokuthi zingalawula kanjani ukuqhuma kwe-IBS.
Eminye imithi athe ingasiza ekwelapheni i-IBS ifaka:
Imithi elwa namagciwane , ezibulala amagciwane amabi emathunjini amancane. Imithi elwa namagciwane evame ukufundwa kakhulu ye-IBS I-Xifaxin ( nxibhabhe ).
Ama-Probiotic , okwandisa amabhaktheriya amahle emathunjini futhi kungasiza ekuthuthukiseni imizwa. Ukwengeza ama-antibiotic nge-probiotic inganciphisa imiphumela emibi yamathumbu, njengokuqunjelwa, nohudo.
Ama-prebiotic , okuphakela ama-bacteria amahle (ama-probiotic) kusiza ekwakheni i-gut biome enempilo.
Izidambisi ( incwadi engekho emthethweni ), ikakhulukazi labo abasemndenini we-tricyclic we-anti-depressants, bangasiza ukulawula amathumbu, noma basize ukuphazamiseka kwemizwelo.
Izindlela zokwelapha ezilandelayo zingasiza ukuphatha ukucindezeleka nezimo ezihlobene nezifo zengqondo:
Ukwelashwa kwengqondo: Ukuthola usizo lochwepheshe ngokukhathazeka, ukudangala, ukuhlukumezeka, noma imiphumela evela kuma-ACE edlule angathuthuki kubalulekile, kusho uDkt. Clarke.
Amasu okuphumula: I-International Foundation Yezinkinga Zamathumbu (IFFGD) incoma ukuphefumula okujulile, noma ukuphefumula okwe-diaphragmatic / kwesisu; ukuxegiswa kwemisipha okuqhubekayo, okudinga ukuthi ugxile emisipheni ethize oyiklinyile, bese uphumule; nezithombe ezinhle, okusho ukuthi usebenzisa ingqondo yakho ukuzibona usesimweni esizolile nesinokuthula.
Ukwelashwa kokuziphatha kwengqondo (CBT): Le ndlela ingasiza ekushintsheni izindlela zokucabanga nokuziphatha. Kuyasiza ukwelapha ukukhathazeka, ukudangala, kanye nezimpawu ze-IBS.
Amaqembu okusekela: Ukuhlangana nabanye abantu abahlangabezana ne-IBS ehlobene nokukhathazeka kungaqinisa ukuthi awuwedwa.
Uma ucabanga ukuthi ingcindezi ibangela ukuqhuma kwe-IBS, ukuthatha izinyathelo zokuyilawula kunganciphisa ukuqina kwezimpawu zakho nokuphila kwazo isikhathi eside — ukuze ubuyele empilweni ejwayelekile.
Izimbangela zokuhlaselwa yisifuba somoya kanye nokuthi ungazivimbela kanjani
I-Caffeine Powder Ingabulala: Amaqiniso ama-5 asheshayo Okufanele Uwazi
ungabamba inyumoniya kumuntu onayo
Ngingalinda isikhathi esingakanani ukuthatha uhlelo b
yini ukufunda ushukela egazini okungalungile
siyini ushukela wegazi ojwayelekile ongazili
ukuziqhayisa nge-apula cider uviniga wokutheleleka ngemvubelo
isisetshenziswa siphi zanaxlex